गुरूङ पहिरनमा चिटिक्कै! :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
गुरूङ पहिरनमा चिटिक्कै!
घान्द्रुक, चैत १९
कास्कीको घान्द्रुकमा आएका आन्तरिक पर्यटकहरू गुरूङ पहिरनमा सजिएर तस्बिर खिचाउँदै। तस्बिरः सेतोपाटी
घान्द्रुकका होटल तथा होमस्टेमा १ हजार रूपैयाँदेखिको प्याकेज पाइन्छ। यसमा वेलकम टी, डिनर, बेड र ब्रेकफास्ट सुविधा हुन्छ।
कास्कीको घान्द्रुक गाउँमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक रमाउने प्रशस्तै चिजबिज छन्। गुरूङ संस्कृति, जीवनशैली र हिमाली सौन्दर्य यहाँका मुख्य आकर्षण हुन्। अचेल घान्द्रुक आइपुग्ने पर्यटकहरू गुरुङ पोशाक र गहनामा ठाँटिएर तस्बिर पनि खिचाउँछन्। यस्ता तस्बिरहरू घान्द्रुकको मिठो सम्झना बनिरहन्छन्।
पर्यटकले सयदेखि डेढ सय रुपैयाँ तिरेपछि गुरुङ पहिरन लगाउन पाउँछन्। घान्द्रुकमा यस्तो सुविधा दिलाउने श्रेय पर्यटनकर्मी हरिमाया गुरुङले पाएकी छिन्। ‘दार्जिलिङ घुम्दा त्यहाँको पोशाक भाडामा दिएको देखें’, उनले भनिन्, ‘त्यसैले आफ्नो गाउँ घान्द्रुक फर्केपछि त्यसकै सिको गरें।’
गुरुङ पहिरनमा सजिएकी घान्द्रुक घुम्न आएकी एक युवती। तस्बिरः सेतोपाटी
घान्द्रुक पुग्ने पर्यटकहरू यस्तो पहिरनमा चिटिक्क देखिन्छन्। अचेल घान्द्रुकका अन्य केही होटलले पनि पर्यटकलाई यस्तो सुविधा दिँदै आएका छन्।
खासमा पुनहिल र अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्ने घान्द्रुक (२,०५० मिटर) आन्तरिक पर्यटन हबका रुपमा विकास भैसकेको छ। गाउँबाट अन्नपूर्ण साउथ, हिमचुली र माछापुच्छे« हिमालको मिठो दृश्य देखिन्छ। घुम्नका लागि पुरानो गाउँ, संग्रहालय र जंगल छन्।
कास्कीको घान्द्रुक गाउँबाट देखिएको कुमारी हिमाल माछापुछ्रे।
पर्यटन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष किसम गुरुङकाअनुसार घान्द्रुकका होटल तथा होमस्टेमा एकै पटक १२ सय जना बास बस्न सक्छन्। यहाँ एक राते प्याकेजको होटलको स्तरअनुसार १ हजारदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ।
काठमाडौंबाट पोखरा हुँदै एकै दिनमा घान्द्रुक जान भ्याइन्छ। घान्द्रुकसम्म सडक जोडिएपछि आन्तरिक पर्यटक बढेका हुन्। पोखराबाट ६० किलोमिटर दूरिमा पर्दछ घान्द्रुक गाउँ। पोखराको बागलुङ बसपार्कबाट बस र हरिचोकबाट घान्द्रुक जाने जिप छुट्छन्।
समितिका अध्यक्ष किसमलाई सम्पर्क गरेर गाउँ तथा बस÷जिपका बारेमा जानकारी लिन सकिन्छ।
पर्यटकले घान्द्रुकमा दुई रात बस्ने गरि यात्रा योजना बनाउँदा राम्रो हुन्छ। हामी आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई समान व्यवहार गर्छौं। हिजोआज घान्द्रुक नेपाली पर्यटकबाटै धानिएको छ।
सम्पर्कः किसम गुरूङ, अध्यक्ष, पर्यटन व्यवस्थापन समिति, घान्द्रुक ,फोन- ९८५६०२५२२२
कास्कीको घान्द्रुक गाउँ ।
घान्द्रुकमा इन्द्रेणी ।
अन्नपूर्ण बेस क्याम्प यात्रामा निस्केका युवा ।
रायोको साग ।
कास्कीको घान्द्रुकमा आएका आन्तरिक पर्यटकहरू गुरूङ पहिरनमा सजिएर तस्बिर खिचाउँदै।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत १८, २०७८, २३:१२:००